सावधान ! बालबालिकालाई धेरै लिची खान नदिनु मृत्यु नै हुनसक्छ – Nepal Japan
नेपाली समय : 12:00:15
जापानी समय : 03:15:15
सावधान ! बालबालिकालाई धेरै लिची खान नदिनु मृत्यु नै हुनसक्छ
14 June, 2019 15:16 | जल/वातावरण/स्वास्थ्य | comments | 227250 Views
अहिले मीठो फल लिचीको याम हो र सहजै पाइने हुँदा अत्यधिक सेवन गर्दा यसले ज्यानै लिनसक्छ भन्नेतर्फ हामी सबै सचेत हुनु जरुरी छ । पछिल्लो तीन सातामा लिची धेरै खाएका कारण ४७ जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ ।
समाचार हो बिहारको, त्यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बताएअनुसार लिचीमा हुने एक रसायनका कारण ती बालबालिकाको मृत्यु भएको हो । जसलाई सुक्ष्म इन्सेफ्लाइटिस सिन्ड्रोम भनिन्छ ।
स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार ती बालबालिकाको रगतमा चिनीको मात्रा कम भएको थियो । रगतमा चिनी कम हुनुका पछाडी लिचीमा हुने रसायन भूमिका खेलेको छ । चिनीमा रगतको मात्रा कम भएपछि शरीरले फ्याट्टी एसिडलाई पचाएर ग्लुकोज बढाउन थाल्छ ।
विज्ञहरूका अनुसार लिचीमा त्यस्तो प्रकारको रसायन हुन्छ । लिची खाँदा त्यो रसायन कलेजोमा गएर बस्छ । जब तापक्रम बढ्छ त्यो रसायन कलेजोबाट बाहिर निस्कन्छ ।
लिचीले लियो दुई वर्षीय बालकको ज्यान
विहारका स्वास्थ्य अधिकार सञ्जयकुमारका अनुसार मुजफ्फारपुर धेरै लिची फल्ने क्षेत्र हो । बालबालिकाको मृत्यु हुनुमा लिचीको भूमिका छ भन्ने हाम्रो शंका हो तापनि सत्य हो की जब तापक्रम घट्छ र पानी पर्छ । लिची खाए पनि नखाए पनि यस्ता घटना हुँदैनन् ।
बिरामी बालबालिकाका अभिभावकले छोराछोरी दिनभरी लिचीका रूखमा झुण्डिने र टन्न लिची खाएर आउने भएकाले राति खाना नखाने बताएका थिए ।
मुजफ्फारपुरका दुई अस्पतालले गत जनवरीदेखि नै यस्ता किसिमका १ सय ७९ वटा बिरामी भर्ना गरेका थिए । बालबालिकाको मृत्यु भने केही साता अघिदेखि भइरहेको छ ।
खाली पेटमा लिची खाँदा ज्यान नै जान सक्ने